मंसिर २१ गते आइतबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
३५ हजार घुससहित सशस्त्र प्रहरी अख्तियारको नियन्त्रणमा
प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा राजसंस्थाको पक्षमा बृहत प्रदर्शन
नेकपा स्थायी कमिटी आइतबार, अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमाथि छलफल हुने
दुईजना श्रीमती हुँदाहुँदै तेस्रो ल्याउने वडाध्यक्ष पक्राउ
सुनसरीमा एकै दिन दुई जनाले आ त्मह त्या गरेका छन । सुनसरी इनरुवा नगरपालिका ६ का दशन मोचीले हिजो आफ्नै घरमा छेउको गाई ग्वालीमा झुण्डि-एर आ त्मह त्या गरे ।
त्यस्तै सुनसरीकै कोशी गाउपालिका २२ बर्षिय सन्तोष कुमार यादवले पनि हिजै नाम नखुलेको विषादी सेवन गरी आ त्मह त्या गरको हुन ।
लकडाउनको अबधीमा डेढ महिनाको अवधिमा ४ सय ९२ जनाले आ त्मह त्या गरेका छन । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको चैत ११ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म ४ सय ९२ जनाले आ त्मह त्या गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
यसरी आ त्मह त्या गर्न उनीहरुले पासो प्रयोग गरेको देखिएको छ। अर्थात् सबैभन्दा धेरै मानिस झु-न्डिएर आ त्मह त्या गरेका छन्। सल, प्लास्टिकको डोरी, कपडा प्रयोग भएको देखिएको छ । ४ सय १३ जनाले झु-न्डिएर आ त्मह त्या गरेका छन् । ७१ जना विष प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
गएको आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा ५ हजार ७ सय ५४ जनाले आ त्मह त्या गरेका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ५ हजार १ सय २४ जनाले आ त्मह त्या गरेका थिए। आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा आ त्मह त्या गर्नेको संख्या झनै उकालो लाग्यो र ५ हजार ३ सय १७ पुगेको थियो। विगतको तथ्याङलाई हेर्दा नेपालमा दैनिक १४ देखि १५ जनाले आ त्मह त्या गरेको देखिन्छ ।
२० तस्विरमा हेर्नुहोस् नायिका सुरविना कार्कीका ‘हट एण्ड बोल्ड’ लुक्स
बलिउडका चर्चित ५ अभिनेत्री जस्ले बाबु छोरासँग प्रेम गरे !
फोटो खिचाए बापत जेल जीवन भोगिरहेकी मोडलका १८ तस्विर हेर्नुहोस !
सन्तानलाई होचो हुन नदिन बेलैमा गर्नुहोस् यी ६ काम, हर्लक्क बढ्नेछ उचाइ
यी हुन् पटक पटक प्रेममा असफल भएका नेपाली अभिनेत्री…
पत्रकारमाथि जाइलाग्ने मालपोतका कर्मचारी पक्राउ
झापा मेचीनगरकी उपमेयर उप्रेती चढेको गाडी जलाउने प्रयास
सफारी चलाउँदा चलाउँदै सुनिलले ज्यान गुमाए
गाजाँ र ब्राउनसुगर सेवन गर्ने एक युवतीसहित नौंजना पक्राउ
एकआपसमा ठोकिएका २ मोटरसाइकललाई ट्रकले कुल्चिँदा २ जनाको निधन
यतीको ‘माउन्टेन फ्लाइट’, ८ हजार ८४८ मा एउटा टिकट किन्दा अर्को सित्तैमा
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र प्रकाशको भिडियोले तहल्का मच्यायो [भिडियोसहित]
‘फेयर एन्ड लभ्ली गर्ल’ यामी गौतमको बोल्ड तस्विरहरु